Saint Lucia Reallọ Ala LOT-LC01
(Citizenship nke Saint Lucia maka oke nke Alpina Saint Lucia)
Nweta oke nke ụlọ oriri na ọ hotelụ inụ na Saint Lucia iji nweta amaala
Allọ nkwari akụ Alpina Saint Lucia na Alpina Square
Hotel Alpina Saint Lucia na Alpina Square dị na ndịda nke agwaetiti ahụ, ihe ruru. Nkeji 5 si Ọdụ ụgbọ elu mba Hewanorra, nke gọọmentị Saint Lucia kwupụtara na a ga-arụzigharị ya.
Alpina Saint Lucia na Alpina Square bụ ụlọ ọrụ ndị gọọmentị kwadoro n'okpuru Citizmụ amaala Saint Lucia site na Mmemme Mmemme. Ihe oru abuo a bu akuku Horse Lagoon na Saiti A nke pearl nke CARIBBEAN Complex Resort, nke gunyere ugbua ocha agba oso ocha nke ndi ozo ma ndi Royal Lawn Club nke Saint Lucia na aru oru ya.
Ọrụ abụọ a dị na mpaghara ndịda agwaetiti a ihe ruru. Nkeji 5 site na ọdụ ụgbọ elu mba Hevanorra, nke na-agagharị ugbu a. Nsogbu nke oru a di nso na Hevanorra International Airport na odi mfe inweta ebe ndi njem nleta di n’akuku Caribbean nke di n’akuku odida anyanwu dika Pitons - UNESCO World Heritage Site nke Saint Lucia, obodo ndi mere ochie Soufriere, Soufriere sọlfọ sọlfọ, Diamond Falls, Ogige Botanical , wdg D., Ihe niile ruru. Ha nọ n'ọnọdụ dị mma 30 km pụọ.
Ọ bụ Alpina Management AG, ụlọ ọrụ njikwa nke Alpina Mountain Resort & Spa dị na Chiertschen, Switzerland ga-achịkwa họtel ndị dị n'akụkụ Alpina Saint Lucia. Alpina Saint Lucia ga-agụnye ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ na mmekorita ya na mahadum ndị ama ama n'ụwa. N'aka nke ọzọ, Alpina Saint Lucia ga-arụ ọrụ na Alpina Square ma nwee ụlọ ahịa na azụmaahịa dị elu.
Alpina nkwari akụ Saint Lucia
Akụkụ nke etiti obodo PEEBI NKE CARIBBEAN, nke nwere ọnụ ụlọ 231 a, nwere ụlọ nkwari akụ iri na asaa a rụrụ maka azụmahịa na njem njem njem na Saint Lucia. Ngwongwo ndi ozo gunyere:
- Colọ kọfị
- lọ oriri na ọtaụ openụ na-emeghe ụbọchị niile
- shoplọ ahịa kọfị / Ogwe
- restaurantslọ nri agbụrụ
- Ebe azụmahịa
- Wellness center / spa
- Ebe igwu mmiri na mbara ala
- Ahịa ahịa
- establishlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ
Na mgbakwunye na 34 elu mma SOHO (Obere Office / Home Office) Njirimara, Alpina Square ga-enwe ihe eji enyere ndụ aka dịka:
Ebe maka ihe omume
· Ngwakọta nri ngwa ngwa
· Ogwe egwuregwu
Pub (oche - 42 n'ime ụlọ, 36 n'èzí)
Lọ ahịa ejiji
Shopslọ ahịa ịchọ mma
Mgbatị na mma center
Mụ amaala Saint Lucia ENG
Mụ amaala Saint Lucia RUS
Laghachi Saint Lucia Real Estate
Adreesị: Arthur Evelyn Building Charlestown, Nevis, Saint Kitts na Nevis Ekwentị: + 44 20 3807 9690 E-mail: info@vnz.bz
Adreesị: Estonia, Tallinn, Pae 21, ụlọ ọrụ 25 Ekwentị: + 372 712 0808
Adreesị: Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenia Ekwentị: + 386 64 233 000, + 386 64 177 151, + 386 31 728 023
Adreesị: Singapore, 7 Temasek Boulevard Suntec Tower One # 12-07 Ekwentị: + 6531593955
Adreesị: China, Hong Kong, 15 / F Millennium City 5, 418 Kwun Tong Road ekwentị: + 852 81703676
2021, Mmmmmmmmmm Na ikpo okwu Shopify